စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဉာဏ်စမ်းပဟေ|ိအထူးများ - ပဟေyouိသင်အခြားတစ်ဝက်ကိုတွေ့ပြီးမှကြာရှည်ခံမည်လော။
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ၂၄ နာရီဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအဆက်အသွယ်နံပါတ်များ ထိုင်ဝမ်စက်မှုလုပ်ငန်းအကဲဖြတ်အတွက်နံပါတ်တစ် ဦး ဆောင်အမှတ်တံဆိပ် 0800-250-001
ဘာသာစကားများကို Select လုပ်ပါ英语阿拉伯语简体中文တရုတ် (ရိုးရာ)ချက်သမ္မတနိုင်ငံ丹麦语ဒတ်ချ်ဖင်လန်ပြင်သစ်德语意大利语ဂျပန်韩语波兰语葡萄牙语俄语西班牙语瑞典语ဖိလစ်ပိုင်ယူကရိန်းဗီယက်နမ်马来语ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာ (မြန်မာ)ဟာဝယေံ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုပေး
အေးဆေးတည်ငြိမ်ဟန်ဆောင်ဖြေ - ခင်ဗျားရဲ့ဆက်ဆံရေးဟာတည်ငြိမ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းပေးနေတာလို့ခံစားရပြီးတဲ့နောက်၊ နောက်တစ်ဝက်လောက်နဲ့မင်းစကားများတာနဲ့၊
အော်ဖြေ - ဒီဆက်ဆံရေးကပျော်ရွှင်မှုထက်နာကျင်မှုကိုပိုဖြစ်စေတယ်။ တစ်ခါတစ်လေအတွေးအမြင် (သို့) အယူအဆတွေကအရမ်းကွဲပြားတယ်။ ငြင်းခုံဖို့လွယ်တယ်။ နှစ်ဖက်စလုံးကတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြောင်းအလဲလုပ်ချင်ကြတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ၊ အကယ်၍ သင်သည်အခြားတစ်ဝက်နှင့်ရေရှည်ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းလိုပါကတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး စိတ်ကူးများကိုလေးစားပါ။
သင်၏လက်များကိုသင်၏မျက်လုံးများဖုံးအုပ်ထားပါဖြေ - လက်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအခြေအနေကိုနှစ်သက်တယ်။ နှလုံးသားနှစ်ခုလုံးအတူတကွချိတ်ဆက်ထားတယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာဘယ်အခက်အခဲတွေကိုသင်ကြုံတွေ့ရပါစေ၊ ဒါပေမဲ့နှစ်ခုရဲ့အားသာချက်နဲ့မကျော်လွှားနိုင်တဲ့အခက်အခဲတွေမရှိပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ယုံကြည်ပြီးသင့်ဘဝအပေါ်မှီခိုအားထားပါ။ မင်းရှေ့မှာ
အကြောင်းပြချက်အားဖြင့်ချန်ထားပါဖြေ - ဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့ဆက်ဆံရေးအတွက်၊ ခင်ပွန်းသည်နဲ့ဇနီးနဲ့တူပြီးချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့မီးပွားမှာမရှိတော့ဘူး၊ ပြmanyနာများစွာလည်းတဖြည်းဖြည်းပေါ်ပေါက်လာတယ်။ အကယ်၍ ပါတီနှစ်ခုဟာအနာဂတ်အတွက်ဘုံရည်မှန်းချက်မရှိဘူးဆိုရင်၊
အံ့သြသွားတယ်ဖြေ - မင်းရဲ့စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးဟာအန at တရာယ်ရောက်နေပြီ။ မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်၊ တတိယပါတီပေါ်လာလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ကြောက်သည်။ သို့မဟုတ်သင်ကပြင်ပကမ္ဘာ၏အလွယ်တကူသွေးဆောင်မှုခံရနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းကိုဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်မကိုက်ညီပါကနှစ်ဖက်ကြားရှိဆက်ဆံရေးသည်ပြိုကွဲလုနီးပါးဖြစ်နေလိမ့်မည်! ဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်မြဲရန်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများပိုမိုလိုအပ်သည်။
Rieter အကြောင်းခရက်ဒစ်ဗျူရို၊ တရား ၀ င်ခရက်ဒစ်အစီရင်ခံမှုကုမ္ပဏီဖြစ်သောဆယ်နှစ်ကျော်အကြွေး ၀ န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည်။ခရက်ဒစ်ဗျူရို!
ကျွမ်းကျင်မှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အပတ်စဉ်ပုံသေအရောင်းသမားသင်တန်းပေးခြင်း၊အကြွေးဗျူရိုအခကြေးငွေပွင့်လင်းမြင်သာသောစျေးနှုန်း။ Rieter ခရက်ဒစ်အကြံပေးအခမဲ့လိုင်း:0800-250-001 (24 နာရီဝန်ဆောင်မှု)
သင်လိမ်မည် သင်လိမ်လည်သူလားစစ်ဆေးပြီးနောက်တစ်ဝက်ကိုလည်းစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
Rieter International Credit Reporting Co. , Ltd. သည်အစိုးရမှတရားဝင်လည်ပတ်သောချေးငွေအစီရင်ခံရေးအေဂျင်စီဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောကွန်ယက်ထောက်ခံချက်သည်အမြဲတမ်းဖြစ်သည်၊ လုပ်ငန်းခွင်မစ်ရှင်သည်သင်၏စိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုရွေးချယ်ရမည်။ အခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး0800-012-312
Taoyuan ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်ကုမ္ပဏီ: 102F, 2, Zhongping လမ်း၊ Taoyuan City, Taoyuan City
ထိုင်ပေချေးငွေဗျူရို: ဒုတိယ၊ ၉ ထပ်၊ နံပါတ် ၂၇၈၊ ပုဒ်မ ၃၊ ချုံကင်းမြောက်လမ်း၊ ထိုင်ပေမြို့၊
Hsinchu Credit Information Corporation: 6၊ Donghua လမ်း၊ Xiangshan ခရိုင်၊ ဆင်ချူးမြို့
Taichung Credit Information Corporation: 218 အဆောက်အအုံ၊ 23၊ အပိုင်း ၁၊ ၀ န်синလမ်း၊ တိုင်တုန်မြို့၊ နန်တွန်ခရိုင်
Kaohsiung Credit Information Corporation: 232 အဆောက်အအုံတစ်ခု၊ 4၊ အောင်မြင်သောလမ်း၊ ကုန်းဘောင်၊ Kaohsiung City
ဟောင်ကောင်ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်ကော်ပိုရေးရှင်း: 100 ဘုရင်မ၏လမ်းမအလယ်၊
ဂျပန်ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်ကော်ပိုရေးရှင်း: 30 / F Shinjuku Park Tower၊ 3-7-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, တိုကျို, 163-1030
Golden Gate ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်အေဂျင်စီ
Xiao San Xiao ဝမ်အားဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်
တက်ကြည့်ဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုရှာဖွေနေ
မူပိုင်ခွင့်©2019 Rieterခရက်ဒစ်ဗျူရို မူပိုင်ခွင့်များကိုအပြည့်အဝထိန်းသိမ်းထားသည်။ ခရက်ဒစ်သတင်းအချက်အလက်လုပ်ငန်း၊ ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုကိုရှာဖွေခြင်း၊